Kumaa ahaa Afhayeenka Taliban ee mudada 20-ka sana ah ku dhax shaqeynayay caloosha cadowgiisa? [Warbixin].
Saturday September 18, 2021 - 17:56:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Afhayenka Xarakada Daliban Thabiixulaah Mujaahidi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday i nuu mudda badan ku noola Magalada Kabul oo ah caasimada dalka Afghanistan.Afhayenka Xarakada Daliban Thabiixulaah Mujaahidi ayaa markii ugu horreysay shaac
Afhayenka Xarakada Daliban Thabiixulaah Mujaahidi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday i nuu mudda badan ku noola Magalada Kabul oo ah caasimada dalka Afghanistan.Afhayenka Xarakada Daliban Thabiixulaah Mujaahidi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday i nuu mudda badan ku noola Magalada Kabul oo ah caasimada dalka Afghanistan.
Xilli Cadowgii kusoo daalay dalka ee Americanku hoggaminayay iyo Xukumadi burburtay ee Kabul ay moodayeen in Shakhsi ahaan qof jira uusan aheyn balse uu yahay magac lagu jiha warrerinayo warbahinta gudaha iyo tan caalamiga ah intaba.
Wareysi gaar ah oo uu siiyey wargeyska express tribune e laga leeyahay dalka Pakistan, ayuu ku shegay in si qarsoodi ah uu kaga shaqeynayay magalada Kabul, sidoo kalena ay aad u yaraayeen dadka ay is bar garanayaan, marka lagasoo tago codkiisa oo uu wareysiyo ku bixin jiray taas ayaana u suurta galisay inuu shaqadiisa ku hor qabsado cadowg baadi goobayay, kuwaas oo xitaa lacago madax furasho ah ku baadi goobayay.
Kadib qabsashadii Magalada Kabul ayuu si degdeg ah kagasoo hor muuqday warbaahinta wuxuuna shir jaraid ku qabtay caasimada dalka muuqaalkiisa ayaana kadis ku noqday warbahinta caalamka arrinkaas oo markii hore moodayay Magaca Dabiixulah moodayay mid warbahinta loo sameystay.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in uu tiro dhowr jeer ah ka badbaday howlgallo raaf ah oo ay fulinayeen Askarta Mareykanka iyo kuwa xukumada Kaabul, inkastoo ay xusid mudan tahay in sirdoonada cadowga ay moodayeen inuusan aheyn qof ku sugan saaxada dagaalka, taas oo dhalisay shakiga ah inuu ku dhex dhuumanayo magalooyinka waaweyn ee dalkaasi.
Sheikh Dabiixullah Mujahid ayaa yiri "waxaan ahaa nin si xuriyad leh ku dhex mara guud ahaanba gobolada kala duwan ee dalka, anigoo dareemaya in ay baadi goob culus iigu jiraan Askarta Mareykanka iyo Sirdoonkooda, balse taasi igama hor istaagin inaan tago furimaha dagaalka, halkaas oo aan kula kulmi jiray saraakisha ciidanka iyo qaar katirsan hogganka sare" wuxuuna intaas sii raaciyey in howlgallada ka dhacaya dhamaanba gobolada ay si daqiiqad daqiiqad ah usoo gaarayeen waqti kasta taas oo cadowga qeybihiisa kala duwan ka yaabisay.
Saxafi ka howlgala idacada wargeyska the independent ayaa yiri "Waxaa jiro su'aalo dhowr ah oo ku saabsan Shakhsiyada Dabiixulah Mujaahid taas oo ay ugu muhiimsan tahay in uu yahy qof kaliya iyo in ay yihiin Majmuuco dhameystiran, iyagoo wax ku dhisinaya shakhsiyada kasoo hor muuqatay warbahinta oo ay sheegeen inuu ka da’yar yahay qofkii warbaahinta kula xiriiri jiray warbahinta qeybaheda kala duwan".
Afhayenka ayaa tilmaamay inuu sanadkii 1978dii ku dhashay mandiqada GARDEZ ee hoos tagta gobolka Baktiya, Jihaadka ka dhanka ah Cadowgana uu soo bilaabay isagoo 16 sano jir ah, illaa markii dambe Alle uu u suurta galiyey inuu arko miraha jihaadkooda, kaas oo ah in ay gacanta ku dhigeen guud ahaanba dalka Afghanistan.
Sheikh Dabixulah Mujahid ayaa horey u sheegay inuu saacad waliba diyaar u ahaa Shahaado, maadama uu imaarada u hayay howl culus, taas oo ka reebeysa inuu damiyo talefanadiisa, cadowgana ay u fududahay in ay healan goobta uu ku sugan yahay, haddii ay 1 mar ka fakato wax yar oo macluumaad ah, ama xitaa la helo mid kamid ah lambarada uu kala hadlo warbahinta gudaha iyo tan caalamiga ah.
Sidoo kale mar uu ka hadlayay magaca Dabixulah iyo halka uu ka yimid ayuu tilmaamay, in magacan uu yahay kiisa rasmiga ah, balse qiyaadada mujahidinta ay ugu dareen Neynaasta ah Mujaahid, taas oo noqday mid ku haboon, oo aan marnaba ka hari doonin noloshisa iyo xitaa geeridiisa ka gadaal.
Melleteriga Suudaan oo Inqilaabay xukuumaddii u madaxda ka ahaa Cabdalla Xamduuk.
Ma dhab-baa in Soomaaliya ay guulweyn ka gaartay dacwaddii badda ee Kenya kala dhaxaysay? [dhageyso warbixin].
Saraakiil katirsanaa Maamullada 'Koonfur Galbeed' iyo 'Jubbaland' oo howlgallo lagu dilay.
Nin Soomaali ah oo Mas'uul ka ahaa weerarkii lagu dilay xildhibaan David Amess.
Sarkaal katirsanaa maamulka 'Jubbaland' oo si yaab leh loogu dilay Afmadoow.
Midowga Afrika oo Walaac ka muujiyay Ammaanka Soomaaliya iyo mustaqbalka howlgalka AMISOM [Warbixin].
Shirkadda duulimaadyada Itoobiya oo ku lug lahaatay dagaalka ka holcaya gobolka Tigray [Warbixin].
Cabdulqadiir Khaan caalimkii Niyugleerka dowladda Pakistan oo dhintay [Warbixin].
Nin Saaxir ahaa iyo Askari Boolis ah oo lagu toogtay degmada Jamaame [dhageyso].
Farmaajo oo ka beensheegay taariikhda ka Dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya.